Barnaamijka xukuumadda ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo dhammeystiran (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Barnaamijka xukuumadda ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo dhammeystiran (AKHRISO)
Ra’isul wasaare Xasan Kheyre waxaa uu maanta ku guuleystay in uu golaha shacabka ka helo codka kalsoonida xukuumaddiisa, kadib markii ay wasiirradiisa heleen codadka kalsoonida 224 Xildhibaan oo ka mid ah golaha shacabaka, aqlabiyadna lagu ansixiyay.
Inta aan xukuumadda la ansixin, Ra’isul wasaare Xasan Khayre waxaa uu golaha shacabka u qeybiyay, kana hor akhriyay barnaamijka xukuumaddiisa ay ku shaqeyn doonto 4-ta sano ee soo socota.
Ra’isul Wasaare Kheyre waxa uu ballan-qaaday in xukuumadiisa ay soo afjari doonto amni darrida, faqriga, musuq-maasuqa, colaadaha iyo arrimo kale oo ay muhiim tahay in muwaadinka ogaado, si berri lagula xisaabtamo ra’isul waaraha iyo golihiisa wasiirrada.
Hadaba Halkan Ka Akhriso, Barnaamijka Xukuumadda Kharye:
Barnaamijkan oo aanu helnay nuqul ka mid ah qoraalkiisa, waxaa ku qornaa in wax looga qabanayo arrimo badan oo ay ku jiraan; gurmadka abaaraha, sugidda amniga, cadaaladda, kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka Musuqa, qof iyo cod 2020-ka, Dowlad wanaag, Adeegga bulshada, dib-u-heeshiinta iyo xiriirka caalamiga.